XOG:Dastuurka Maamulka Galmudug oo wax laga badalayo & Puntland oo.. |
XOG:Dastuurka Maamulka Galmudug oo wax laga badalayo & Puntland oo..
Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntiland ayaa si adag uga soo horjeestay dhismaha Maamulka Cusub ee Galmudug, waxaana Maamulka Puntiland uu ku doodayaa in Maamulka Galmudug uu sheeganayo Degmooyin iyo deegaano ay ka taliyaan.
Dastuurka Maamulka Galmudug ayaa qoraya in Xuduuda Maamulkaasi uu yahay Gobolka Nugaal ,waana mida keentay qeylo dhaanta kasoo yeerto Maamulka Puntiland oo si cad u sheegtay in ay kasoo horjeedaan Dhismaha Maamulka Galmudug ayna u arkaan shar kusoo korortay.
Dowlada Soomaaliya oo dooneysa in la qaboojiyo Xiisada Siyaasadeed ee u dhaxeysa Maamulka Puntiland iyo Maamulka Cusub ee Galmudug ayaa ku talisay in wax ka badal lagu sameeyo Dastuurka Maamulka Galmudug si loo qanciyo Maamulka Puntiland una aqoonsadaan jiritaanka Maamulka Galmudug.
Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Galmudug oo shalay kulan ku yeeshay Magaalada Cadaado ayaa loo qeybiyey nuqulo ka mid ah dastuurka Maamulka Galmudug ee horey loo ansixiyey si wax ka badal loogu sameeyo qodobo kamid ah dastuurkaasi.
Qodobka wax laga badalayo ayaa lagu sheegay in uu yahay kan tilmaamaya in Xuduuda Maamulka Galmudug yahay Gobolka Nugaal, waxaana taa badalkeeda Dastuurka lagu qorayaa in Gobolka Mudug uu xaduud la leeyahay kaliya Puntiland iyadoona la magacaabeyn halka ay ku egtahay Xuduuda labada maamul.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed oo shalay Xildhibaanada Baarlamaanka ugu tagay xarunta ay shirka ku lahaayeen ayaa ka codsaday in wax ka badal ku sameeyaan Qodobo kamid ah Dastuurka si loo qaniyo maamulka Puntiland uuna maamulkooda u noqdo mid la aqoonsado .
Ra’izul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid oo dhawaan kulan dheer Garawe kula qaatay Madaxweynaha Puntiland ayaa ku qanciyay in wax ka badal lagu sameeyo dastuurka Galmudug loona deeynayo Puntiland deegaanada ay ka maamusho Gobolka Mudug.
Dastuurka Maamulka Galmudug ayaa la filayaa in si deg deg ah wax ka badal loogu sameeyo kahor inta uusan Magaalada Muqdisho ka dhicin shirka wadatashiga Dowlada Federaalka iyo Maamul Goboleedyada ka jira Dalka si Puntiland loogu qanciyo in ay shirkaasi kasoo qeyb gasho.
clomiphene, order zithromax.
Maamulka Puntiland ee kasoo horjeeda in Galmudug ay sheegato guud ahaan Gobolka Mudug ayaa maamulkaasi naftiisa waxa uu sheegtaa Dastuurkana ugu qoran Gobolo iyo Deegaano aysan ka talin sida Gobolada Sool iyo Sanaaag ay kajiraan dhoor Maamul oo isdiidan